मकैका विभिन्न परिकार खाने हो ? आउनुहोस् मिस्टर कर्न - Idea Studio Nepal
अचम्म लाग्यो ? मकै भुटेर, हरियो मकै पोलेर, उसिनेर र पिसेर ढिँडो मात्र खाने हामी नेपालीलाई अचम्म लाग्नु स्वाभाविक नै हो ? आखिर मकैले नै सडकदेखि पाँचतारे होटलसम्मको स्वाद दिन सक्छ त ? प्रश्न उब्जिन सक्छ । पक्कै पनि सक्छ । यो गज्जबको जुक्ति लगाएका छन् – राजकुमार अधिकारीले ।
यसरी ‘सेन्ट्रल किचन’ बनाउनका लागि अब मिस्टर कर्नलाई १५ लाख रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्ने अधिकारी बताउँछन् । मकैका परिकारहरू अहिले नेपालमा फाट्टफुट्ट मात्र देखिँदै आएका छन् मकैका परिकारहरू । मिस्टर कर्नले भने २० प्रकारका परिकारहरू खानाका पारखीहरूलाई पस्कँदै आएको छ, जसमा मकैको चिया, सुपदेखि लिएर भेज पिजालगायत २० प्रकारका परिकारहरूको स्वाद पाउन सकिन्छ । यसका लागि लोकल मकै र स्विट कर्न अर्थात् गुलियो प्रकारको मकैको प्रयोग गरिँदै आएको छ ।
‘सोचदेखि उद्यमसम्म’ नारा लिएर सुरु भएको आइडिया स्टुडियोले २४ जना सिर्जनशील युवाहरुलाई तालिम, परामर्श र लगानीको माध्यमबाट उद्यमसम्मको बाटो पहिल्याउन सहयोग गर्दै आएको छ ।